Warsaxaafadeed Guddida Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xisbiga WADDANI | Salaan Media
Warsaxaafadeed Guddida Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xisbiga WADDANI
April 4, 2013 | Published by: admin
XUKUUMADDII KULMIYE WAY KU HAFATAY SIYAASADDII DIBEDDA
Shirka Turkiga iyo Su’aalaha ku Gadaaman
Waxaynu ognahay in aanay jirin siyaasad dibedeed oo lagu kalsoonaan karo oo xukuumaddan iyo Wasaaraddeeda Arrimaha Dibedeedu ay marnaba ummadda iyo hay’adahaha siyaasadda midna u soo bandhigtay ilaa maanta. Waxaynu ognahay, in Turkigu ku caddeeyey qoraaladdisii weli qalinkoodu qoyanyahay in aanu oggolayn gooni isutaagga Somaliland, gaar ahaan safarkii u dambeeyey ee waftigii madaxweynuhu watay. Haddaba,
1. Waxay ummaddu u baahantahay in Xukuumaddu bayaamiso doowrka Turkigu shirkan ku leeyahay: ma madal lagu wadahadlo oo dhexdhexaad ah ayuu bixinayaa oo iyagaa labada daraf keligood wadahadlaya? Ma Turkigaa dhexdhexdhaadiye ka noqonaya oo markaa mawqifkiisii wax ka beddelay, ma sidii shirkii ugu horeeyey ee London ayaa dawlado kale oo caalamka ahi kula jiraan? Xaggay ka dhaceen dawladihii shirkii u horeeyey ina dhexjoogay?
2. Ilaa maanta wax ajande la hayaa ma jrto. Maxay Xukuumaddu uga qarainaysaa dadkeeda iyo hay’adaha siyaasaiga ah ee dalku leeyahay? Mise wuxuu gogolxaadh u yahay shirar kale oo la qarinayo, sida ka Qadar ee aanu maqalay iyo kuwa kale oo qarsoon?
3. Xisbiga WADDANI wuxuu hore u sheegay in karaamada iyo dawladnimada Somaliland ay u shardi tahay in ay ka muuqato meeqaamka brotokoolka la siiyo waftiga Somaliland ka socda meel kasta ay tegayaan. Haddaba Intaan la tegin shirka Turkiga waa in ay cadaataa in meeqaam siman labada daraf ku tegayaan hadday heer wasiir tahay iyo hadday heer madaxeed tahayba. Haddii uu sidaa noqonwaayo WADDANI Wuu ka soo horjeedaa shir qaranimada Somaliland lagu wiiqayo aan ajendihiisu acaddayn.
4. Mar haddii ay Xukuumaddu ka caga jiidday shirkii talo qaran, iyo in ay ka talageliso ajandaha shirka Xisbiga WADDANI marnaba ma aqoonsanayo wixii saamayn ku leh masiirka ummadda ee shirkaas ka soo baxa.
Somaliland iyo Dawladaha Bariga Dhexe
Waxaynu aragnaa in safarada Madaxweynahu iyo wasiiradiisuba beryahan damabe u badanyihiin dhinaca Carabta iyo Turkiga. Waxaynu kale oo wada ognahay in ay yihiin dawladihii badheedka u uga soo horjeeday gooni isutagga Somaliland. Haddii ay Xukuumaddeenii dhinacaa u janjeedhsatay, maxay natiijo ah ee ka haysaa qaddiyadda Somaliland.
Markii uu bilaabmay wadahadalka Somaliland iyo Somaliya, maxaa mar keliya ay dawladahaasu inoogu soo dhowaadeen, iyadoo labaatankii sanadood ee hore aanay dheg inoo jalaqsiin. Ma iyagaa dhinicii Somaliland u soo liicay mise innagay dhinacoodii inoo jiiteen. Xukuumaddu waxay ka hadashaa taageero dhaqaale oo weli dhalanteed ah, laakiin saamaynta siyaasadda iyo wixii la iska yidhi midna ummadda ugamay warramin. Miyaanay siyaasaddeena dibeddu ka unkamin raadinta ictiraafka Somaliland oo shir wal oo caalamka loo tago aanay ahayn in laga warbixiyo wixii soo kordhay.
Dawladii hore ee tacabka badini inooga galay, ee aynu filaynay in ay ina wada hadalsiiyaan Somalia si ay inoo kala guraan halkuu xidhiidhkoodii ku dambeeyey, kuwaas oo Afrika, Yurub iyo Maraykanba lahaa kana bilaabmayey dawladaha deriska.
Shirkii Talo Qaran: Xukuumaddu talona ma hayso, talona qaadanmayso.
Xukuumadda Siilanayo waxay ku dhawaaqay oo muddo iminka laga sugayey in ay shir wadatashi qaran ah ay qabanayso. Shirka qaran ku dhawaaqiddiisu waa tii lagaga jeestay markii ay faramadhan kala soo noqotay safarkii London ee labaad. Muddo ayey shirka talo qaran dadka ku maaweelinaysay, oo muwaadiniin qurbaha joogana ay casuumada u dirtay.
Xisbiga WADDANI, shirkaas aad buu u danaynayey sidii uu warbaahinta ka sheegay, waayo wuxuu u arkayey rajada keliya ee aynu leenahay in aynu ku tashano oo talo midaysan meel wada dhigano sidii aynu Somaliya u wadahadli lahyn. Waxay rajadu ahayd in aynu darafka iyo darafyada badan ee inaga soo horjeeda aynu u hub samaysano. Laakiin ayaandaro weeyaan in ay cadaatay in Xukuumaddu marnaba aanay ku talagelin in ay wadatashi dhab ah samayso oo wax ay la soo badheedhi la’adahay qarsoonyihiin .
Waxaa ogtihiin shirkaa in ay ku muddaysay wakhti aanuu dhacayn oo ay Xisbiga Kulmiye shir uu leeyahay ku beegtay. Waxa inoo xigtay in shirkii wadatashiga qaran ee Madaxweynaha ummaddu ugu baaqay, hoos hoos loola hadlo dadkii la soo casuumay in aany iman, intii yarayd ee ka soo hordhacday ka noqoshadaasna, in uu Madaxweyne casha ku samirsiiyey, halkaana lagu aasay rajadii laga lahaa in Xukuumaddu arrin loo talo badsaday ay meel la tagto. Waxaanu ummadda Somaliland u sheegaynaa, in ay ogaadaan in talo meel la dhigtay aanay jirin, iyadoo shir Somalia lala gelayana lagu dhawaaqay oo hoosta la inaga soo geliyey in uu laba toddobaad ku qabsoomaya.
Haddaba, Waxaa la yaab ah, waxa Xukuumaddu ay uga cagajiidayso in ummdda ay kala tashato arrimhan masiirkooda saamaynaya. Wadahadalka Somaliya lala gelayaa way ka culusyihiin wax Xukuumadda ay keliya tuurta u ridato, somalilandna wax ka culustahay wax go’ welliba qarsoodiya lagu qaado. Waa arrin u baahan in aynu isu keeno aqoonteena oo dhan: hadday yihiin siyaasiyiin, sharciqaano, dhaqaalayahano, bulshada rayidka, salaadiinta, culamaa Diinka, haweenka, dhallinyarad iyo guud ahaanba waxgaradka Somaliland.
Xisbiga WADDANI ka hadhi maayo in talo qaran la yeesho, oggolaana maayo in masiirka ummadda ay gacmo dhowr qof lagu soo uruuriyo kuwaas oo aan aqoon iyo khibrad midna ku metelikarayn karayn inatynu kor ku soo sheegnay. Haddaba, Xisbiga WADDANI ku baaqayaa shir talo qaran ka soo baxdo, oo ummaddu ku kalsoontahay kaga tashato aayahaeeda.
Xisbiga WADDANI wuxu ka digayaa in sidan habaqlaha ah ee Xukuumaddu u soo tuuraysa marba shir ilaa heer Madaxweyne iyada oon laga tashan, guuldarana u horseeda kara isku duubnaanta looga baahanyahay ummadda Somaliland, wakhtigan xasaasiga ah; Waxaanu leenahay taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa.
Guddida Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xisbiga WADDANI